www.camaloow.com - News: Wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta Si Cada ugu hor yimid .......
June 19 2018 19:49:46
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta Si Cada ugu hor yimid .......
<?php </a> Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta ka hor yimid heshiiskii shalay lagu saxiixay xarunta madxtooyada ee Muqdisho, kaasoo dowladda Soomaaliya ay ku aqoonsatay maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed.
Cabdullaahi Goodax ayaa muujiyay in wasaaraddiisa fara-gelin lagu haayo, ayna dhaliilsan tahay sida wax u socdaan, isagoo si cad u diiday habkii loo maray aqoonsigii maamulka saddexda gobol oo ay muuqatay in hal dhinac kaliya ka socotay.
Cabdullaahi Goodax oo la hadlay laanta afka soomaaliga ku hadasha ee VOA-da ayaa ku tilmaamay heshiiskaas mid sharci darro ah, waxa uuna sheegay in markii hore qalad la galay, saxiixa heshiiskii shalayna uu kaas la mid yahay.
“Arrintan sharciga ma waafaqsana, wasaaradeyda markii hore siyaasad gooni ah ayay ka lahayd arrinta maamul u sameysta dalka, hadda meelaha maamullada loo sameynayo xor ma ahan, meelo ka mid ah weli waa la haystaa, runtii kii ka horreeyay heshiiskan ayaa far-qaha la isku haystaa weli kanna kuwaas ayuu la mid yahay,” ayuu yiri Goodax.
Sidoo kale hadalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa kusoo aadaya kadib munaasabad shalay ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo lagu saxiixay heshiis ay wada gaareen maamulka saddexda gobol iyo lixd gobol, iyadoo dowladdu aqoonsatay maamulka saddexda gobo lee ka kooban gobollada Shabeelaha Hoose, Bay iyo Bakool.
Heshiiska uu ka hor yimid Goodax ayaa waxaa si isku mid ah u taageray dowladda Mareykanka, Qaramada midoobey, midowga Yurub, midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD iyadoo taasi ay ka soo hojeedaan kooxihii qabsaday Magaalada Marka.
· xassan on June 25 2014 · 0 Comments · 96571 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 26,257,736 unique visits